निर्वाचन आयोगले अध्यक्ष-महासचिव चिन्दैन, केन्द्रीय समितिको बहुमत हेर्छ
काठमाडौं। निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले नेकपाको केन्द्रीय समितिको बहुमत हेरेर आयोगले आधिकारिक मान्यता र सूर्य चुनाव चिन्ह दिने बताएका छन्। पूर्वप्रमुख यादवले एक अनलाइनलाई अन्तर्वार्ता दिँदै भने, अध्यक्ष, महासचिव होइन, केन्द्रीय समितिको बहुमत हेर्छ।’
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को आधिकारिक मान्यता र सूर्य चुनाव चिन्ह कसले पाउँछ? प्रधानमन्त्री केपी ओली र प्रचण्ड–माधवकुमार नेपाल पक्ष अलग-अलग भएपछि अहिले एकले अर्कोले आफूहरुले पाउने दावी गरिरहेका छन्।
यादवले कुनै एक पक्षले हामी बहुमतमा छौँ भन्दै नाम, चुनाव चिन्हमा दाबी गरेपछि आयोगको प्रक्रिया सुरु हुने बताए। तर, त्यसका लागि कागजात देखाउनु र्पयो। संसदीय व्यवस्थामा सबैभन्दा महत्वपूर्ण भनेको गणित नै हो। संख्या नै हो। संसदमा पनि त्यही हुन्छ, उनले भने।
कानूनी प्रक्रियाअनुसारका सबै कागजात बुझाएपछि संख्याले निर्धारण गर्ने उनले बताए। अदालतमा कागजात बुझाएपछि सुनुवाइ हुने भन्दै उनले निर्वाचन आयोगले सुन्छ, हेर्छ। उपस्थित गराएर गणना गर्ने अदालतले साक्षीलाई बयानका लागि बोलाउँने बताए। तर, निर्वाचन आयोगले सबैलाई आफैँ उपस्थित हुन भनेर केन्द्रीय कार्य समितिमा भएका कति सदस्यलाई मान्ने ? उनले, प्रश्न गरे।
यादवले भने, ‛दुवै पक्षले आफूसँग बहुमत छ भन्ने दाबी गर्छन्। बहुमत भनेको संख्यामा हुन्छ। त्यो संख्या कसलाई मान्ने, कुन विन्दुबाट संख्याको निर्धारण गर्ने? मुख्य विषय त्यो हो। दुवैले पक्षले बहुमत छ भन्छ तर कुन संख्यालाई बहुमत मानेर त्यो भनिरहनु भएको हो? धेरै कुरा गर्न अफ्ठ्यारो पनि छ। किनभने यो आयोगमा विचाराधीन विषय हो। आयोगले कानुनी रुपमा हेरिरहेको विषयमा बाहिर धेरै टिप्पणी गर्नुपनि उचित होइन।’
उनले अहिलेसम्मको जुन नजिर छ, त्यसले पार्टीको अध्यक्ष, महासचिव र माइन्युटलाई आधार नमानेको बताएका छन्। पार्टीभित्रको सहमति आधारमा कोही अध्यक्ष वा महासचिव हुन्छन्। केन्द्रीय कार्यसमितिको संख्या निर्णायक हुन्छ। डकुमेन्ट जोसँग पनि हुनसक्छ। कहिले अध्यक्ष र महासचिवले पनि राखेको हुनसक्छ। अध्यक्ष वा महासचिवसँग डकुमेन्ट हुँदैमा त्यो पार्टी फलानो एक जनाको भन्ने हुँदैन। यो कानूनी कुरा होइन, व्यवहारिक कुरा हो,उनले भने।
दुवै विभाजित समूहले आआफ्नो शक्ति देखाइरहेको छ। तर शक्तिको जाँच गर्ने आधार के हो? त्यसको जाँच गर्ने थर्मामिटर के हो, मुख्य कुरा त्यो हो। उनले भने, ‛कसैले चार सय ४७ मध्ये मसँग ३ सय १५ छ भनेका छन्। कसैले विस्तार गरेर ११ सय ९९ बनाएका छौँ भनेको छ।’
यस्तो अवस्था आएपछि निर्वाचन आयोगले चिठ्ठी लेखेर दुवै पक्षलाई सोध्ने र उनीहरुबाट प्राप्त प्रमाणहरुलाई इजलासमा राखेर फैसला गर्ने यादवले बताए। संसद् पुनस्र्थापना भयो भने चुनाव नहुने अवस्था आउँने उनले बताए। यादवले यतिबेला आयोगकै निष्ठा जोगाउने चुनौतीमा रहेको बताएका थिए।
उनले भने, ‛कति राजनीतिक दल आए गए, कति नेताहरु आए गए। पार्टीभित्रको शक्ति परिवर्तन हुन्छ। तर, व्यवस्थापिका हुन्छ, निर्वाचन आयोग वा सर्वोच्च अदालत सधैँ हुन्छ। हामीले १ सय २२ वटा दल बेहोरेका हौँ। तर संस्थाहरुले आफ्नो निष्ठा कायम राख्नुपर्छ। त्यो काम संस्थाको पदाधिकारी र दलले पनि गर्नुपर्छ।’
नेकपाको राजनीतिक विभाजनसँगै केन्द्रीय समितिको करिब ७० प्रतिशत संख्या आफूतिर रहेकाले विगतका नजिरहरूलाई समेत आधार बनाएर पार्टीको आधिकारिक नाम र सूर्य चुनाव चिन्ह आफूहरूले पाउनु पर्ने जिकिर प्रचण्ड–नेपाल पक्षले गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री ओली पक्ष भने एक जना अध्यक्ष, महासचिव र बैठकको माइन्युट आफूसँग भएकाले नाम र चुनाव चिन्ह आफ्नै हुने दाबी गरिरहेको छ।
Tagsअयोधीप्रसाद यादव निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख
khem aryal says:
देख्नेले हेर्दैन । हेर्नेले देख्दैन !!!